तिलोत्तमाले विकास निर्माणको भुक्तानी असारमा नदिने | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार तिलोत्तमाले विकास निर्माणको भुक्तानी असारमा नदिने
on: February 10, 2019 प्रदेश समाचार
माघ २७, रुपन्देही (अस) । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने भएको छ । ‘असारे विकास’ रोक्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुने ठहरसहित यस्तो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘विकास निर्माणका कामको चेक जेठ मसान्तसम्म मात्र काट्ने निर्णय भएको छ । असार १ पछि विकास बजेटको चेक नकाट्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
कार्यपालिका बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गत साउनमै गरेको हो । साउन २० गतेको ३८ औं नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘चालू आवको बजेट अनुसारका योजना २०७६ जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी योजनाको भुक्तानी समेत सोही मिति भित्र लिने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित वडामा रहेका योजनाहरु यथासमयमा नै सम्झौता गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गर्ने निर्णय गरियो । यो व्यवस्थाबाट ०७६ असार १ गतेदेखि कुनै पनि योजनाको भुक्तानी सो आर्थिक वर्षमा नदिने निर्णय गरियो ।’
नगरपालिकामा हालसम्म २७० ओटा विकास योजनाको सम्झौता भैसकेको छ । त्यसमध्ये ५२ ओटा योजनाको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी भैसकेको योजना शाखाले जानकारी दिएको छ । सम्झौता भएका योजनाहरुको बजेट १४ करोड ७० लाख ६१ हजार रुपैंयाँ छ । नगरपालिकाले ठूला योजनाको कार्यान्वयन ठेक्का प्रक्रियाबाट गराएको छ । यो वर्ष क्रमागत योजनाको रुपमा रहेका भ्यूटावर, प्रमुख प्रशासनिक भवन, अतिथि गृह, सभाहल निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यस्तै पाँच ओटा वडा कार्यालय भवन, वडा नं. ७ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन, वडा नं. १० कान्छीबजारमा खेलकुद मैदान, ड्राईभर टोल–डिंगरनगर कालोपत्रे, विभिन्न वडामा सडक मर्मत, ट्रान्सफर्मर खरीदलगायतका योजनाहरु पनि चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा भुक्तानीमा समस्या